Jatta Wöötanö – Yekuana, Fampitàna hafatry ny foko momba ny kolontsain-dry zareo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2019 8:27 GMT
Havia miankavanana: Fernando Carías; mpandrindra ny tetikasa Jatta Wöötanö, Maydareno Cortes; ny tale Kuyujani sy Saúl López, mpampiroborobo ny tetikasa. Sary natolotry ny tetikasa.
“Jatta Wöötanö – Yekuana, Ireo mpampita vaovaon'ny foko “dia tetikasa iray fanofanana momba ny media nomerika ary ireo teknolojia fampitambaovao sy fifandraisandavitra (TICs) dia nikendry, raha kely indrindra, tanora indizeny 15 avy amin'ny vondrom-piarahamonina Boca de Ninchare ao amin'ny faritra afovoan'ny Renirano Caura ao anaty fanjakàna Bolívar any Venezoelà. Mampisongadina ilay toerana ny fahazoany aterineto mandalo zanabolana, tolotra omen'ny Orinasam-panjakana misahana ny fifandraisandavitra (CANTV), miaraka amin'ireo faravodilanitra mahafinaritra misy ala mikitroka manome endrika ilay toerana nampiasaina ho amin'ny fiofanana.
Ilay hetsika feno famoronana izay nantsoinay hoe “mpampita hafatry ny foko,” izay mpikambana avy amin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny avokoa dia liana sy nifofotra hifehy ny fampiasàna ireo fitaovan'ny media sy ny TIC. Manana fahalalana tsara ny kolontsainy ireo tanora, hatramin'ny fahatsapana, ny famoronana ary ny fandraisana andraikitra mba hamorona votoaty mifanaraka amin'ny tena zavamisy iainan'ny vahoaka eo amin-dry zareo.
Hita ao anatin'ny tariky ny tetikasa avokoa ny mpanabe, ny mpampiroborobo ara-kolontsaina sy ireo manampahaizana manokana amin'ny resaka fifandraisana, samy manana fahaizana manokana avokoa momba ny indizeny sy ireo olana ara-kolontsaina. Ara-tantara dia efa niaraka niasa tamin'ny Oniversite Indizeny ao Venezoelà ry zareo (UIV). Hita ao anatin'ilay vondrona ry:
Saúl López: kofehy voalohany mampifandray amin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny sy ireo tanora mpandray anjara. Avy amin'ny foko Yekuana izy no sady mpianatra nahazo diplaoma ary profesora ao amin'ny Oniversite Indizeny ao Venezoelà ihany koa, toerana iasàny amin'ny maha-mpandrindra ny Educomunication.
Danny Franco: mpandrindra akademikan'ilay tetikasa. Manana diplaoma ambony momba ny Fanabeazana izy, mari-pahaizana ambony avy amin'ny Siansan'ny Fanabeazana tao amin'ny Universidad Católica Andrés Bello ao Caracas. Profesora ihany koa ao amin'ny Oniversite Indizeny Andrana ao Venezoelà any amin'ireo faritra izay tena manahirana ny fampiasàna ny TIC sy ireo tetikasa sosialy ary fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina indizeny.
Fernando Carías: zokiolona mpitantana ny tetikasa. Manana diplaoma amin'ny zavakanto avy amin'ny Oniversite foibe ao Venezoelà (UCV) ka asongadina manokana amin'izany ny Fampiroboroboana ara-kolontsaina. Ananany ihany koa ny diplaoma ambony momba ny Fanabeazana, ny Teknolojian'ny Fanabeazana sy ny Fifandraisana. Profesora ao amin'ny Oniversite Indizeny Andrana ao Venezoelà izy, any amin'ireo faritra ampiharana ny “fampitàna hafatry ny foko”, ny fanabeazana momba ny media ary ny fampiasàna manahirana ireo TICs.
Natao ny 29 Septambra ny iray tamin'ireo hetsika voalohany tamin'ireo tetikasa vatsiana, niaraka tamina fihaonana teo amin'ireo mpandrindra ny fandaharanasa sy ny fikambanana indizeny Kuyujani, fiaraha-mientana izay misolo vava ho an'ny tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina Yekuana sy Sanema ao amin'ny Lembalemban'ny Renirano Caura.
Natao ilay fihaonana mba hampahafantarana ireo hevitra sy tanjon'ireo hetsika hiseho ato anatin'ny volana vitsivitsy ho avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Boca Ninchare, izay ho ivon'ireo fanofanana momba ny media nomerika (fametrahana tambajotra sôsialy) homena ireo tanora indizeny. Ny fikambanana Kuyujani no nanolotra izay rehetra tohana ara-potodrafitrasa ilaina hitaterana sy hitsinjarana ireo antso malalaka ho an'izay handray anjara, hatramin'ny fahalinan-dry zareo hanolotra hetsika mitovitovy amin'io koa any amin'ireo vondrom-piarahamonina hafa any aoriana any.
Nadikan'i Eduardo Ávila avy any amin'ny teny Espaniola, talohan'ny nadikàna azy ho amin'ny teny Malagasy